▷ Maya, Ma rumaysan karno sida uu u wanaagsan yahay heshiiskan isniinta ee Apple Watch Cyber ​​​​Isniinta, midna. - 【Isbarbardhigga】 2022
Maya, ma rumaysan karno sida uu u wanaagsan yahay heshiiskan Apple Watch Cyber ​​​​Isniinta midkoodna.
Fiidiyowga Fiidiyowga Amazon (Video ku saabsan Baahida); Unax Ugalde, Alexandra Jiménez, Julián López (Jilayaasha)
Waxaan si farxad leh ula yaabnay heshiisyada Cyber ​​​​Isniinta Apple Watch ee sanadkan, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah laga soo bilaabo Black Friday maalmo ka hor. Caadi ahaan way adkaan doontaa in la helo qiimo dhimis ku habboon nooc kasta oo Apple Watch ah, mid cusub ama mid duug ah, laakiin waxa jira wax ka weyn sannadkan oo naga dhigay labanlaab faa'iidada.
Apple Watch 5 waa nooc waxyar ka da' weyn, oo la sii daayay 2019, laakiin waxa ay arkaysaa cabbir aan caadi ahayn oo weyn hadda. € 290 qiimo dhimis. Waa heshiis weyn oo Cyber ​​​​Isniin ah oo qiimihiisu hoos ugu dhigaya € 459 Amazon hadda. Kaliya waa € 10 ka baxsan qiimaha rikoorka, iyo iyadoo Apple Watch 5 ay wali tahay waxa aan u aragno qaali, xitaa qiimaha la dhimay, aad ayay dhif u tahay in la arko iyada oo ka hooseysa taas.
(Ma joogo Maraykanka? Hoos ugu dhaadhac heshiisyada Apple Watch Black Friday ee gobolkaaga.)
Heshiiska Isniinta ee ugu Wanaagsan ee Apple Watch 5 Cyber ​​​​Senity
Heshiiskan Apple Watch 5 Cyber ​​​​Isniinta ayaa loogu talagalay nooc gaar ah oo ah "Birta Dahabka Ah ee Dahabka ah ee Dhagaxa Isboortiga" wuxuuna u muuqdaa moodelka kaliya ee hadda laga heli karo iibka Amazon. Sidoo kale waa nooca weyn ee 44mm, markaa khibradda jireed ee saacaddu way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xidhan cabbirka gacantaada.
Haddii aad raadineyso nooc cusub, sida Apple Watch 7, Amazon wali waxay leedahay midabyo lagu heli karo kaliya € 479, oo aan ka badneyn heshiiska Apple Watch 5 Cyber ​​​​Isniinta. Haddii aad gabi ahaanba uga baahan tahay tignoolajiyada ugu dambeeyay ee Apple, soo jeedintan ayaa laga yaabaa inay mid kuu noqoto.
Ka dib alaabooyin badan oo Apple ah? U hubso inaad booqato Xaruntayada Macaamiisha ee Cyber ​​​​Isniinta Apple si aad u ogaatid kala goynta heshiisyada ugu fiican ee alaabooyin badan oo Apple ah, AirPods ilaa iPhones iyo in ka badan.
Heshiisyo badan oo Apple Watch 5 Cyber ​​​​Isniin ah
Meel kasta oo aad ku nooshahay, waxaad ka heli doontaa dhammaan qiimaha ugu hooseeya ee Apple Watch 5 ee shabakada halkan, oo leh heshiisyo laga heli karo gobolkaaga.
Apple Watch 5 heshiisyada ugu fiican ee xilligan
Macluumaad dheeraad ah Jimcaha madow iibka wax ka qabtaan
Amazon: 30% laga dhimay 4K TVs, Fire TV Stick iyo inbadan oo ku jira heshiiska Jimcaha Madow
AirPods Pro: iibka ah € 189.99 ee Amazon
Adidas: 50% qiimo dhimis lagu sameeyay dharka isboortiga iyo kabaha + rarista bilaashka ah
TV-yada aan qaaliga ahayn: TV-yada casriga ah ee ka bilaabma $99.99 Best Buy
Dharka jiifka kirismaska Labbiska qoyska oo ku habboon € 14.99 ee Amazon
H&M: hadiyadaha casriga ah ee ka bilaabmaya € 5,99 ragga, dumarka iyo carruurta
Keurig: Ilaa 30% ka dhimis kuwa kafeega kafeega ah iyo kuwa sameeya ee Amazon
Layla: qiimo dhimis ilaa € 900 ah oo ku saabsan godadka furaashyada inta lagu jiro dhacdada Jimcaha Madoow
Microsoft: Ku badbaadi ilaa € 400 dusha sare ee Pro 7
Nectar: € 499 qiimo dhimis ah joodariyaasha + € 399 hadiyado bilaash ah
Oculus Quest 2: Ka hel € 50 eGift Card at Best Buy
Satva: LaComparacion gaar ah: ku badbaadi €250 joodariyaasha qaaliga ah
Samsung: Ilaa € 3,500 ee kaydka Jimcaha Madoow ee 4K iyo 8K QLED TV
Nadiifiyaha Shark: Ilaa 15% laga dhimay Xadhkaha-la'aanta iyo Vacuums-ka ee Amazon
telefishannada: Amazon Fire Smart TV-yada laga bilaabo € 99.99
Walmart: kayd badan oo telefishinada ah, faakuumooyin aan xadhig lahayn iyo qaar kaloo badan
Safar : ilaa 50% qiimo dhimis ah geedaha kirismaska, qurxinta, taajka iyo sharabaadada